Director Satik Kaushik Oo 25 Sano Kadib Raali Gareynaayo Boney Kapoor Iyo Sababta!! – Filimside.net
25 sano kahor waxaa la daawaday filmka Roob Ki Rani Choron Ka Raj kaaso ay hogaamiyaal ka ahaayen Anil Kapoor iyo Sridevi sido kale mashruucan waxaa doorar muhiim ah kulahaayen Jackie Shroff, Anupam Kher iyo kuwa kale.
Hadaba Satik Kaushik oo filmkaan Director ka ahaa ayaa u dabaal dagaya mashruucisa oo 25 sano jirsaday balse waxuu baraha bulshada kusoo qoray hadal raali gareen ah.
Maadama filmkaan ganacsi ahaan guul darestay isagoo lacago waali ah lagu sameyay sido kalena uu qarash gareye ka ahaa Boney Kapoor sidaa awged waxuu Satish Boney ka raali gareynayaa in filmkaan ka guul darestay isaga madaxiisa aawged.
Satish filmkii kowaad ee uu Director ka noqdo ayuu ahaa filmkaan qasaaro xoog leh ayuuna u geestay Boney sida aawged 25 sano kadib ayuu si fagaaro ah u raali gareynayaa saaxiibkisa Boney isagoo dhahay.
“Waxaa 25 sano jirsaday Roob Ki Rani Choron Ka Raja dhamaan jilayaasha Filmkaan farxada maanta wey ila qeyb sanayaan meel walba oo ay joogan marka laga reebo marwa Sridevi oo maanta naga maqan misane aan nooleyn waxaan kaloo halkaan ka raali garina Boney Kapoor iyo qasaariihi niyad jabka watay ee uu mashruucan kala kulmay.”